အရှင်ပညာနန္ဒ | MoeMaKa Burmese News & Media
ရွှေဝါရောင်သံဃာတော် အရှင်နန္ဒ၀ံသနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း (အရှင်ပညာနန္ဒ) မိုးမခရုပ်သံ၊ အရှင်ပညာနန္ဒ၏ မှတ်တမ်းတင်အစီအစဉ်၊ ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related...
မန္တလေးမြို့၊ ဂဠန်နီဆရာတော်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း အရှင်ပညာနန္ဒ၊ ဧပြီ ၉ ၊ ၂၀၁၃ (မိုးမခရုပ်သံ) No tags for this post. Related posts No related posts.
လူဝင်စားသမီးလေးရွှန်းရွှန်းဝေ(အသက်(၃)နှစ်၊ခြောက်လ) ရုပ်သံ အရှင်ပညာနန္ဒ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၃ မကြာသေးခင်ကပြန်မရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အမိမြန်မာပြည်ကိုအလည်အပတ်သွားခဲ့တယ်။ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်၊ ၀မ်းတွင်းမြို့ နယ်၊တဲစုကျေးရွာမှာရှိတဲ့ တောင်ပုလ တောရ ကမ္ဘာအေးဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဇာတိလည်းဖြစ် ဆရာတော်ကြီး ငယ်စဉ်က နေထိုင်ခဲ့တဲ့ (ရေ၀န်း ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေး) ကျောင်းကို...
မိဘမဲ့ကလေးများကို စောင့်ရှောက်နေသူ ဆရာလေးဒေါ်ဧကစာရီနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း အရှင်ပညာနန္ဒ၊ မိုးမခရုပ်သံ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၃ ဒေါ်ဧကစာရီ၊ ဗုဒ္ဓဓီတာ သီလရှင်ကျောင်းတိုက်၊ အမှတ် ၂၂ ကျောင်းအနီး၊ မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုံး 09-730...
ရေ၀န်းဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်း မြင်ကွင်း၊ တဲစု၊ ၀မ်းတွင်း၊ မန္တလေးတိုင်း အရှင်ပညာနန္ဒ၊ မိုးမခရုပ်သံ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၃ စေတနာရှင်၊ ပညာဒါနအလှူရှင်များကို လိုအပ်နေတဲ့ စာသင်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ကလေး တဆောင်လည်း...
လက်ရှိမြန်မာ့အရေး ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ အမြင်နှင့် သုံးသပ်ချက်များ အရှင်ပညာနန္ဒ၊ မိုးမခရုပ်သံ၊ ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၃ လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စနှင့်ပက်သက်ပြီး ရွှေည၀ါဆရာတော်၏အမြင် တရားပွဲများပိတ်ပင်ခံရမှုအပေါ်ရွှေည၀ါဆရာတော်အမြင် No tags for this post. Related posts...
အစိုးရ၏ သံဃာ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့က အရေးယူမှုအပေါ် မကွေးကျောင်းဆရာတော်သဘောထား အရှင်ပညာနန္ဒ၊ မိုးမခရုပ်သံ၊ ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၃ မကွေးကျောင်းဆရာတော် ဦးပါမောက္ခအား OIC ရုံး မြန်မာနိုင်ငံကို အခြေမစိုက်ဖို့အရေး ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့မှုနှင့် လက်ပတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်မှုကို...
မန္တလေးက ဆွမ်းအလှူရှင် အရှင်ပညာနန္ဒ၊ မိုးမခရုပ်သံ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
သားပျောက်အမေတစ်ယောက်၏ ရင်ဖွင့်သံ (ဒေါ်ပေါရွှေ) ရိုက်ကူးတင်ဆက် – အရှင်ပညာနန္ဒ (ပြည်ပရောက်မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့)၊ နယူးယောက် ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No...
ဂဠုန်နီဆရာတော်၏ လက်ပံတောင်းတောင် အရေး အပေါ် သဘောထား မိုးမခ ရုပ်သံ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၂ လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းအကြမးဖက်ဖြိုခွဲမှုနှင့်ပက်သက်ပြီး မန္တလေးမြို့၊မဟာဓမ္မိကာရာမကျောင်းတိုက်၊ငွေငါးကျောင်း၊ ဂဠုန်နီဆရာတော် ဦးကာဝိယ၏ သဘောထားအမြင် အရှင်ပညာနန္ဒ (ပြည်ပရောက်မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့၊ နယူးယောက်) မှ တဆင့်...
အညတရအကျဉ်းသားရဟန်းတော်များ(၂၆) ရွှေည၀ါဆရာတော်အရှင်ပညာသီဟ အရှင်ပညာနန္ဒ၊ အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂ သံဃာအပါး ၉၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ကြည့်မြင်တိုင် သာဓုပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်ကြီးရဲ့ တိုက်ကြပ်ဆရာတော်ဖြစ်ပြီး ‘ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီး’ ၏ ပဓာနတာဝန်ခံ အကျိုးတော်ဆောင်ချုပ် ရွှေညဝါ...
ဒယ်အိုးဆရာတော် ဥူးသုမင်္ဂလနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း – အရှင်ပညာနန္ဒ မေးမြန်းသည်
ဒယ်အိုးဆရာတော် ဥူးသုမင်္ဂလနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း – အရှင်ပညာနန္ဒ မေးမြန်းသည် မိုးမခရုပ်သံ၊ အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၂ အမေရိကန်ခရီးစဉ်အကြောင်း၊ ၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၂ အထိ တရားပွဲများ ပိတ်ပင်ခြင်း ခံရသည့်ကိစ္စ ဓမ္မပူဇာဖြင့်...
အရှင်ပညာနန္ဒ စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂ (၁) နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ကြေညာချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရရှိသော အကျဉ်းသားများ ကို၂၀၁၁ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ (၁၂) ရက် နံနက်(၇) နာရီမှ စတင်လွှတ်ပေးခဲ့ရာ မန္တလေးထောင်မှ...
အရှင်ပညာနန္ဒ သြဂုတ်၊ ၃၁၊ ၂၀၁၂ ဘွဲ့တော် – ဦးဝေပုလ္လ သီတင်းသုံးသည့်ကျောင်း – ရွှေဘုံသာကျောင်း၊ မန္တလေး ချမှတ်ခံခဲ့ရသည့်ထောင်ဒဏ် – (၂၂) နှစ် နေထိုင်ခဲ့ရသည့်ထောင်အမည် – တောင်ငူ၊ မန္တလေးနှင့်...
အရှင်ပညာနန္ဒ သြဂုတ်၊၂၀၊၂၀၁၂ ဒီလဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်နဲ့ ဈေးရောင်းပွဲတော်လုပ်နေတာရယ် ရွှေည၀ါဆရာတော် တရားပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေရတာ တွေရယ်ကြောင့် အပြင်ကို မကြာခဏထွက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီနေ့လည်းရွှေည၀ါဆရာတော်တရားပွဲအတွက် ပိုစတာဓာတ်ပုံသွားကူးရာကနေ ကျောင်းပြန်ရောက်တာနဲ့ အတူနေဦးဇင်းကြီိး ဦးဝါယမက ဆီးကြိုပြီး “စာရေးဆရာမကြီး စစ်ကိုင်းစိမ်းစိမ်း...
အညတရအကျဉ်းသားရဟန်းတော်များ(၂၃) – မဂ္ဂင်ဆရာတော်ဦးဝါသ၀ပဏ္ဍိ
အရှင်ပညာနန္ဒ၊ သြဂုတ် ၂၊ ၂၀၁၂ ဆရာတော်ကြီးနှင့်ထောင်တွင်းအခြေအနေ ထောင်ထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ ဆရာတော်ကြီး တပါးကတော့ မဂ္ဂင်ဆရာတော် ဖြစ်ပါတယ်။ သက်တော်(၇၀)ကျော်၊ ထောင်ရှစ်နှစ် ကျခံနေရသူပါ။ ဆရာတော်ဟာ နိုင်ငံအတော်များများ ရောက်ဖူးပြီး ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး တတ်ကျွမ်းတော်မူပါတယ်။...
ရင်ထဲကဗိုလ်ချုပ် အရှင်ပညာနန္ဒ၊ ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၂ မြင်ကွင်း (၁) အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနား မကျင်းပဖြစ်တာ (၂)နှစ်ရှိပြီ။ ခရီးလွန်နေတာနဲ့၊ အခြားသောကိစ္စတွေရယ်ကြောင့် ဆိုပါတော့။ ဒီနှစ်တော့ အကောင်းဘက်ကို ဦးတည်လာနေပါပြီ၊ ပြောင်းလဲလာနေပါပြီ ၊ အတော်အသင့်...
အရှင်ပညာနန္ဒ ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၂ ဘွဲ့တော် – ဦးဥတ္တမ သက်တော် – (၃၃) နှစ် အဖမ်းခံရစဉ်နေထိုင်သည့်ကျောင်း – သာလိုင်းကျောင်း၊ ငွေတောင်တိုက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့ ။ မွေးရပ်ဇာတိ...
အရှင်ပညာနန္ဒ ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၂ (၁) စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်အောက်မှာ ဘာသာရေးစာပေ ရေးသားဖြန့်ဝေမှု၊ တရားဓမ္မဟောပြောမှုတွေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်တား ဆီးခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ သူတို့ယူဆတဲ့ ရဟန်းတော်များကို ကြီးလေးတဲ့ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းကာလကတုန်းက ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးစတဲ့တောင်ဆိုချက်တွေကို...